PHOTOSHOP မှာစတိုင်များဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲ - PHOTOSHOP ကို - 2019
Photoshop မှာသစ်ကိုစတိုင်များ Install
ကွန်ပျူတာများအတွက် CPU ကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်အများဆုံးတာဝန်ယူမှုနှင့်အတူချဉ်းကပ်ရမည်ဖြစ်သည်ကြောင့် ရွေးချယ်ထား CPU ကိုစွမ်းဆောင်ရည်၏အရည်အသွေးများစွာသောအခြားကွန်ပျူတာအစိတ်အပိုင်းများကိုမူတည်ပါသည်။
ဒါဟာဒေတာ processor ကိုလိုချင်သောပုံစံနှင့်သင်၏ PC ကို၏တန်ခိုးပြန်ပြောပြဖို့လိုအပ်ပေသည်။ သငျသညျကှနျပြူတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ရွေးချယ်ပါက, ပထမဦးဆုံး Processor နဲ့ Motherboard ကအတူအတိအကျဆုံးဖြတ်ရန်။ ဒါဟာအားလုံးမဟုတ် motherboards အစွမ်းထက်ပရိုဆက်ဆာကိုထောက်ပံ့သော, မလိုအပ်သောအသုံးစရိတ်ကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်ကိုအောက်မေ့ရပါမည်။
အဆိုပါ CPU ကိုမှအနိမ့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု, တစ်ပိုင်းမိုဘိုင်း device များအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်အချက်အလက်စင်တာများများအတွက် high-performance ကိုချစ်ပ်တွေနဲ့ပြီးသွား - ခေတ်သစ်စျေးကွက်ရဲ့ CPU ဟာကျယ်ပြန့်သည်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်ညာဘက်ရွေးချယ်မှုအောင်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုအချို့သောအကြံပေးချက်များနေသောခေါင်းစဉ်:
သင်ယုံကြည်စိတ်ချရမယ့်ထုတ်လုပ်သူကိုရွေးချယ်ပါ။ Intel နဲ့ AMD ၏ - စျေးကွက်ထဲကယနေ့တွင်နေအိမ် PC များအဘို့နှစ်ခုသာ processors ကိုပံ့ပိုးပေးရှိပါတယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီ၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောခြယ်သထားသည်။
ကြိမ်နှုန်းမှာသာကြည့်ပါ။ ကြိမ်နှုန်းစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်တာဝန်ရှိသည့်အဓိကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်, သို့သော်ဤစကားမှန်သည်မဟုတ်ကြောင်းကိုတစ်ဦးအမြင်ရှိပါတယ်။ ဒီ option တွင်လည်းအလွန်ကြီး cores ၏နံပါတ်သည်စာဖတ်ခြင်းနှင့်စာရေးခြင်းမြန်နှုန်းသတင်းအချက်အလက်, cache ကိုမှတ်ဉာဏ်သက်ရောက်သည်။
ယင်း၏သင့်ရဲ့ Motherboard ကအထောက်အကူလျှင် CPU ကိုဝယ်ယူခြင်းမပြုမီထွက်ရှာပါ။
အင်အားကြီး Processor ကိုများအတွက်အအေးစနစ်အားဝယ်ယူရန်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုမိုအစွမ်းထက် CPU ကိုများနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုအထက်ပါစနစ်အတွက်လိုအပ်ချက်များ။
သင် Processor ကိုမြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်အာရုံစိုက်။ စည်းကမ်းအဖြစ်, ပထမတစ်ချက်မှာမြင့်မားတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသည်ပါဘူးပေးသောစျေးသိပ်မကြီးတဲ့ပရိုဆက်ဆာ, CPU ကိုပရီမီယံ၏အဆင့်အထိလူစုခွဲနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Intel ရဲ့ Processor ကိုမြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းလုပ်နည်း
Processor ကို AMD ၏မြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်းလုပ်နည်း
Processor ကိုဝယ်ယူပြီးနောက်ပေါ်မှာအချို့သောအပူငါးပိလျှောက်ထားရန်မမေ့မလြော့ပါ - ကမဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအချက်မှာ save ့အချိန်ကြာမြင့်စွာကြာရှည်တံ့သောသာမန်ငါးပိဝယ်ဖို့မအကြံပြုလိုတယ်။
နှစ်ခုသာရှိပါသည် - Intel နဲ့ AMD ၏။ နှစ်ဦးစလုံးသို့သော်၎င်းတို့အကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်, Desktop PC များနှင့် laptop များအတွက် Processor တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးသည်။
Intel ကအစွမ်းထက်အလုံအလောက်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပရိုဆက်ဆာကယ်တင်တတ်၏, ဒါပေမယ့်သူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းစျေးကွက်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အအေး system ပေါ်တွင်ကယ်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့အရှိဆုံးခေတ်သစ်နည်းပညာများ၏ထုတ်လုပ်မှု။ Intel ကကနေ CPU ကိုခဲ overheat, ဒါကြောင့်အကောင်းတစ်အအေးစနစ်ကသာ High-end မော်ဒယ်လိုအပ်သည်။ Intel ရဲ့ပရိုဆက်ဆာများ၏အကျိုးကျေးဇူးကိုကြည့်ကြရအောင်:
Excellent ကသယံဇာတခွဲဝေ။ (သူမ၏အပြင်မဟုတ်တော့ CPU ကိုဆင်တူလိုအပ်ချက်များနှင့်အခြားပရိုဂရမ်ကို run ပေး) အထက်အရင်းအမြစ်-intensive အစီအစဉ်တွင် performance အဖြစ် Processor ကိုအပေါငျးတို့သပါဝါကလွှဲပြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
အချို့ခေတ်သစ်ဂိမ်းနှင့်အတူ Intel ကထုတ်ကုန်ပိုကောင်းအလုပ်လုပ်ကြသည်။
မြေတပြင်လုံး system ကိုတက်အမြန်နှုန်းကြောင့် RAM ကိုအတူတိုးတက်လာသောအပြန်အလှန်။
ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းလက်တော့ပိုင်ရှင်များအဘို့ဤထုတ်လုပ်သူရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုသည် ၎င်း၏ပရိုဆက်ဆာလျော့နည်းပါဝါလောင်, သူတို့ကကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်မဟုတ်အရမ်းပူဖြစ်ကြသည်။
အတော်များများကအစီအစဉ်များကို Intel နဲ့အလုပ်လုပ် optimized နေကြသည်။
ရှုပ်ထွေးသောအစီအစဉ်များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါ multitasking processors ကိုအလိုရှိသောခံရဖို့အများကြီးထွက်ခွာမည်။
"ဟုအဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ပိုမိုပေးဆောင်။ " ရှိပါတယ်
သင်တစ်ဦးအသစ်များ, ထို့နောက်သူကပိုပြီးသင့် system အတွက်မဆိုအစိတ်အပိုင်းများကိုပြောင်းလဲရန်ရန်ရှိသည်လိမ့်မည်ဟုယူဆရသည် (ဥပမာ, မိဘမြေပုံ) နှင့်အတူ CPU ကိုအစားထိုးရန်လိုအပ်ခဲ့လျှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "အပြာ" ဟုအဆိုပါ CPU ကိုအဟောင်းတွေ components နဲ့သဟဇာတမဖြစ်နိုင်ပါ။
ဤသည်စျေးကွက်ဝေစုအကြမ်းဖျင်းညီမျှ Intel ကကြာသည့်အခြား chip ကိုထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့်ဘတ်ဂျက်နှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းအစိတ်အပိုင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်, ဒါပေမယ့်လည်းပရိုဆက်ဆာများ၏ High-end မော်ဒယ်များထုတ်လုပ်သည်။ ဒီထုတ်လုပ်သူ၏အဓိကအားသာချက်များ:
ငွေတန်ဖိုး။ AMD ၏၏အမှု၌ရန်ရှိသည်ပါဘူး "အမှတ်တံဆိပ်အဘို့အ Overpay" ။
စွမ်းဆောင်ရည်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အခွင့်အလမ်းများ။ သငျသညျမူလစွမ်းရည်၏ 20% မှာ CPU ကိုမြန်နှုန်းမြင့်အောင်လုပ်ခြင်း, အဖြစ်ဗို့အားချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်။
AMD ၏ထုတ်ကုန်သည် Intel ကနေ counterparts တွေကိုနှင့်နှိုင်းယှဉ်, multitasking ကိုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ကြသည်။
multi-platform ကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။ မည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိဘဲ AMD ၏ Processor ကိုမဆို Motherboard က, RAM ကို, ဂရပ်ဖစ်ကဒ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
AMD မှ CPU ကို Intel ကနှင့်နှိုင်းယှဉ်လုံးဝယုံကြည်စိတ်ချရသောမဟုတ်ပါဘူး။ bugs အထူးသဖြင့်နှစ်ပေါင်းများစွာများအတွက် Processor ကိုပါလျှင် ပို. ဘုံဖြစ်ကြသည်။
AMD ၏ (user ကလူစုခွဲခဲ့ကြကြောင်းအထူးသဖြင့်အစွမ်းထက်မော်ဒယ်များသို့မဟုတ်မော်ဒယ်များ) မှ processors အရမ်းပူဖြစ်လာ, ဒါကြောင့်သင်ကောင်းတစ်ဦးအအေးစနစ်အားဝယ်ယူရန်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
သငျသညျက Intel ကနေဂရပ်ဖစ်ပေါင်းစည်းကြလျှင်, compatibility ကိစ္စများအဘို့အဆင်သင့်မရ။
အချို့လူများကစနစ်ပိုမြန်အလုပ်လုပ်တယ်ပို cores နှင့်ပရိုဆက်ဆာများ၏အကြိမ်ရေ, ပိုကောင်းသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ဒါကကြေညာချက်ကြောင့်အသာစိတျအပိုငျးတှငျစစျမှနျသောဖြစ်ပါသည် သင်တစ်ဦး 8-core processor ကို install လုပ်ထားပေမယ့် HDD-drive ကိုနှင့် တွဲဖက်. ကြလျှင်, စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောအစီအစဉ်များကို (နှင့်မဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကို) တောင်းဆိုနေတာအတွက်သိသာပါလိမ့်မည်။
အလတ်စားနှင့်အနိမ့် setting များကိုမှာဂိမ်းကစားဘို့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာစံအလုပ်အဘို့, Processor ကိုအကောင်းတစ်ဦး SSD ကိုနှင့် တွဲဖက်. 2-4 core ကိုအလုံအလောက်ရလိမ့်မည်။ ဤသည်ကိရိယာများကိုသင်တစ်ဦးရိုးရှင်းသောအပြောင်းအလဲနဲ့ဂရပ်ဖစ်နဲ့ဗီဒီယိုတစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်း browser များ, ရုံး applications များ, ငါပေးမည်။ ဒီစက်ကိရိယာများမှ CPU ကိုအစားပုံမှန် 2-4 core ကိုတစ်ဦးအစွမ်းထက် 8-core ကိုစက်လည်းပါဝင်သည်ဆိုပါက (နေဆဲအများကြီးဂရပ်ဖစ်ကဒ်ပေါ်မှာမူတည်ပါလိမ့်မယ်သော်လည်း), စုံလင်သောစွမ်းဆောင်ရည်ပင်အစွန်းရောက် setting များကိုမှာခဲယဉ်းဂိမ်းထဲမှာအောင်မြင်လိမ့်မည်။
သငျသညျရှေးခယျြမှုနှစ်ခုအတူတူစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူပရိုဆက်ဆာ, ဒါပေမယ့်မတူညီတဲ့မော်ဒယ်များအကြားဖြစ်ပါသည်ရှိပါကလည်း, သင်အမျိုးမျိုးသောစမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ခေတ်သစ် CPU များအများအပြားမော်ဒယ်များဘို့သူတို့ကအလွယ်တကူထုတ်လုပ်သူရဲ့ website တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့က CPU ကိုကွဲပြားခြားနားသောစျေးနှုန်းအမျိုးအစားကနေဘာမျှော်လင့်နိုင်
စျေးကွက်အပေါ်စျေးအသက်သာဆုံးပရိုဆက်ဆာသာ AMD ၏ကယ်တင်တတ်၏။ သူတို့ကကောင်းကောင်း, ရိုးရှင်းတဲ့ရုံးပလီကေးရှင်းအလုပ်လုပ်ရန်လာပိုက်ကွန် surfing, နှငျ့ "Solitaire" ဂိမ်းလိမ့်မည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အတွက် configuration ကို PC ပေါ်မှာမူတည်ပါလိမ့်မယ်ဤကိစ္စတွင်အတွက်အလွန်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအနညျးငယျ RAM ကို, HDD နှင့်မျှမတို့အားနည်းဂရပ်ဖစ်ကဒ်ရှိပါကဥပမာ, သင်စနစ်၏မှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးအပေါ်အားကိုးလို့မရပါဘူး။
processors ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းအမျိုးအစား။ ဒါဟာက Intel ထဲကနေပျမ်းမျှစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူ AMD ၏နှင့်မော်ဒယ်များကနေအတော်လေးတန်ဖိုးရှိရှိမော်ဒယ်များကြည့်ဖို့ပြီးသားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ချက်သေချာပေါက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအအေးစနစ်, ရာ၏ကုန်ကျစရိတ်အောက်ပိုင်းစျေးနှုန်းများ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုထေမိနိုင်ဘူး။ ဒုတိယဖြစ်ရပ်မှာစွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ဖြစ်လိမ့်မည်, သို့သော် processor ကိုအများကြီးပိုတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အတော်များများက, တဖန်, အတွက် configuration ကို PC သို့မဟုတ် Laptop ကိုအပေါ်မူတည်ပါသည်။
high-အရည်အသွေးကိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းပရိုဆက်ဆာ။ AMD ၏ထံမှထုတ်ကုန်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများအဖြစ်, ဤကိစ္စတွင်၌၎င်း, Intel ရဲ့အကြမ်းဖျင်းညီမျှ။
တချို့ကပရိုဆက်ဆာဒါခေါ်ခြင်း, အစုံအတွက်အအေးစနစ်ဖြင့်ထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ် "ဘောငျ" ။ ဒါဟာသူမပိုကောင်းပြုသောအမှုအလုပ်ရရှိသွားတဲ့လျှင်ထိုသို့လျှင်ပင်အခြားထုတ်လုပ်သူများထံမှ analogue များအတွက် "အိမ်" စနစ်အားပြောင်းလဲပစ်ရန်အကြံပြုသည်မဟုတ်။ အမှန်မှာ "ဘောငျ" စနစ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် Processor ကိုမှအဆင်ပြေအောင်နေကြခြင်းနှင့်အလေးအနက်ညှိနှိုင်းမှုမလိုအပ်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။
အဆိုပါ CPU ကို core ကို overheat စတင်ပါကလက်ရှိတစ်ခုအပိုဆောင်းအအေးစနစ်အားတပ်ဆင်ရန် သာ. ကောင်း၏။ ဒါဟာစျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်နှင့်မည်သည့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအောက်ပိုင်းဖြစ်လတံ့သောအန္တရာယ်ပါလိမ့်မယ်။
စနစ်ကအအေးအဆိုပါ box တွင် AMD မှထက် Intel ရဲ့တာပိုဆိုးသည်က၎င်း၏ချို့ယွင်းချက်ကိုအထူးအာရုံစူးစိုက်မှုကိုမွှုပျနှံဖို့အကြံပြုသည်။ clips အဓိကအား, ပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့လည်းအလွန်လေးလံသောဖြစ်ကြ၏။ ဤသည်ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသည် - Processor ကိုအတူတကွတစ်ဦးစျေးပေါ Motherboard ကအပေါ်တပ်ဆင်ထားတဲ့ရေတိုင်ကီနှင့်အတူလျှင်, သူတို့သည်သူမ၏ပျက်စီးယိုယွင်းသို့ဆောင်ခဲ့ "နောက်ပြန်ကျော်တင်နိုင်" ဖြစ်ကြောင်းတစ်ဦးစွန့်စားမှုလည်းမရှိ။ သငျသညျဆဲ Intel ကကြိုက်နှစ်သက်သည်ဆိုပါကထိုကွောငျ့, သငျသညျကိုသာအရည်အသွေးမြင့် motherboards ကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အခြားပြဿနာလည်းမရှိ - (100 ဒီဂရီကျော်) အစွန်းရောက်အပူနှင့်တကွ, ကလစ်ရိုးရိုးဂဟေဆော်နိုင်ပါတယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, Intel ကထုတ်ကုန်များအတွက်ထိုကဲ့သို့သောအပူချိန်ရှားပါးဖြစ်ကြသည်။
"အနီရောင်" ကိုလည်းသတ္တုကလစ်များနှင့်အတူပိုကောင်းတဲ့အအေးစနစ်, ကိုပြု၏။ ဒီနေသော်လည်းစနစ်က Intel ကနေသူ့ရဲ့ရှိသော counterpart ထက်လျော့နည်းအလေးချိန်။ ဒါ့အပြင်ရေတိုင်ကီဒီဇိုင်း Motherboard ကပေါ်သူတို့ကို install လုပ်ဖို့သိပ်ဒုက္ခမရှိဘဲခွင့်ပြုသဖြင့်, Motherboard ကဖို့ကွန်နက်ရှင်အများကြီးပိုကောင်းပါလိမ့်မည်, ထိုဘုတ်အဖွဲ့ကိုပျက်စီးစေမယ့်ဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ရေတိုင်ကီတွင် AMD Processor တွေကိုပိုပူလာအောင်လုပ်နေတယ် run ဒါကြောင့်အရည်အသွေးဘောငျကြောင်းအကောင့်သို့ယူရန်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည် - ကမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တခုဖြစ်ပါတယ်။
ဘက်ပေါင်းစုံဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူ Hybrid ကိုပရိုဆက်ဆာ
ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးကိုလည်း built-in ဂရပ်ဖစ်ကဒ် (APU) အရပ်၌ပရိုဆက်ဆာများလွှတ်ပေးရေးအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။ သို့သျောလညျးအဆုံးစွန်၏စွမ်းဆောင်ရည်အလွန်နိမ့်သည်ကပဲရိုးရှင်းနေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်လုံလောက်သည် - ရုံးပလီကေးရှင်းအလုပ်, အင်တာနက် surfing, ဗွီဒီယိုများကိုကြည့်ခြင်းနှင့်ပင် undemanding ဂိမ်းများကို။ ဟုတ်ပါတယ်, စျေးကွက်အဘယ်သူ၏အရင်းအမြစ်များကိုလုံလောက်အောင်ပင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အလုပ်များအတွက်ဂရပ်ဖစ်အယ်ဒီတာများအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ဗီဒီယိုကိုအပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်နိမ့်ဆုံး setting များကိုမှာဒီနေ့ရဲ့ဂိမ်းများကို run High-end APU-ပရိုဆက်ဆာဖြစ်ပါတယ်။
ဤရွေ့ကား CPU များကပိုစျေးကြီးတယ်နဲ့သူတို့ရဲ့သမားရိုးကျ counterparts တွေကိုနှိုင်းယှဉ်အများကြီးပိုမြန်အပူနေကြသည်။ ဒါ့အပြင် built-in ကိုဗီဒီယိုမှတ်ဉာဏ်ဘက်ပေါင်းစုံဂရပ်ဖစ်၏အမှု၌အသုံးမကြောင်းသတိရ, နှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ် type ကို DDR3 ကိုသို့မဟုတ် DDR4 ။ ဒီကနေကကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုလည်း RAM ကိုပမာဏအပေါ်မူတည်လိမ့်မည်ဟုအောက်ပါအတိုင်း။ သင့်ရဲ့ PC မှာ RAM ကိုအမျိုးအစား DDR4 (အမြန်ဆုံးနေ့စွဲအမျိုးအစားမှ) ၏ GB ကိုအတော်ကြာသောင်းချီတပ်ဆင်ထားသည်ကိုပင်လျှင်မူကား, built-in မြေပုံပင်၏ပျမ်းမျှစျေးနှုန်းအမျိုးအစားကနေတစ်ဦးဂရပ်ဖစ်ကဒ်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုကိုက်ညီဖို့အလားအလာမရှိပါ။
အဆိုပါအရာ, RAM ကိုဗီဒီယိုမှတ်ဉာဏ် (ကတစ်ဦးတည်းသာ GB ကိုပင်လျှင်) အများကြီးပိုမြန်ကြောင်းကြောင့် ဒါကြောင့်ဂရပ်ဖစ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်သွေးဖြစ်ပါတယ်။
သို့သျောလညျးအနိမ့်သို့မဟုတ်အလတ်စား settings ကိုမှာခေတ်သစ်ဂိမ်းအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်နှစ်သက်နိုင်စွမ်းတောင်မှအနည်းငယ်စျေးကြီးဂရပ်ဖစ်ကဒ်နှင့် တွဲဖက်. , APU-Processor ။ သို့သော်ဤအမှု၌ပြုလုပ်သကဲ့သို့, အအေးစနစ် (AMD မှအထူးသဖြင့်လျှင် Processor ကိုနှင့် / သို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်) ကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ် default အ radiation embedded အရင်းအမြစ်များအလုံအလောက်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာစမ်းသပ်ခြင်းအလုပ်လုပ်တယ်, ပြီးတော့, ရလဒ်များအပေါ် အခြေခံ. အဆိုပါလက်ကိုင် "ဇာတိ" အအေးစနစ်ကသို့မဟုတ်မဆုံးဖြတ်ထွက်သယ်ဆောင်ရန် သာ. ကောင်း၏။
ဘယ်သူ့ APU-Processor ပိုကောင်းပါသလဲ မကြာသေးမီကသည်အထိ, ဒီကဏ္ဍခေါင်းဆောင်များ AMD ၏ခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်နှစ်ပေါင်း၏နောက်ဆုံးစုံတွဲအတွက်အခြေအနေကပြောင်းလဲပစ်ရန်စတင်နှင့်ဤအပိုင်းကိုအတွင်း AMD ၏ထုတ်ကုန်နှင့် Intel ၏စွမ်းရည်နီးပါးနှင့်ညီမျှသည်။ "အပြာ" ဟုယုံကြည်စိတ်ချရသောယူဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာ, စျေးနှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များအချိုးအစားနည်းနည်းကြုံတွေ့နေကြရသည်။ က "အနီရောင်" ကနေ, သင် APU-Processor ၏စွမ်းဆောင်ရည်ရနိုင်ဟာအလွန်မြင့်မားတဲ့စျေးနှုန်းသည်မဟုတ်, အများအပြားအသုံးပြုသူများကိုစိတ်မချရဒီထုတ်လုပ်သူကနေ APU-ကုန်ကျစရိတ်ချစ်ပ်ကိုရှာပါ။
အတူတကွအအေးစနစ်ဖြင့်ပြီးသား Processor ကိုရှိတာပါသော Motherboard က, ဝယ်ယူ compatibility ပြဿနာများ၏အမြိုးမြိုးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့နှင့်အချိန်မှတပါးကတည်းကရအသုံးပြုသူကိုကူညီပေးပါ သင်လိုအပ်သမျှကိုထားပြီး Motherboard ကသို့တည်ဆောက်ထားသည်။ ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သောအဖြေတစ်ခုဟာ pocketbook အပေါ် hit မထားဘူး။
upgrade မရှိလမ်းလည်းမရှိ။ မားသားဘုတ်မှရှိတာပါကြောင်းတစ်ဦးက Processor, ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းပေါရာဏဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူကလုံးဝ Motherboard ကပြောင်းလဲပစ်ရပါလိမ့်မယ်အစားထိုးရန်။
ဒါကြောင့်ပင်နိမ့်ဆုံး setting များကိုမှာ, ခေတ်သစ်ဂိမ်းကစားရန်, ဆင်းရဲသားဘုတ်သို့ပေါင်းစည်းသောတန်ခိုး, processing အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒါပေမဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်နီးပါးမျှဆူညံသံများနှင့်စနစ်ယူနစ်အတွက်အလွန်နည်းနည်းအာကာသကိုတက်ကြာပါသည်။
ဤရွေ့ကား motherboards RAM နဲ့ HDD / SSD ကို drives တွေကိုအဘို့များစွာသော slot နှစ်ခုမရှိကြပေ။
ကွန်ပျူတာမဆိုအသေးအဖွဲပျက်စီးမှုကိုရှောက်သွားသို့မဟုတ်ပြုပြင်ရပါလိမ့်မယ်, သို့မဟုတ် (ကိုပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်) လုံးဝ Motherboard ကအစားထိုးပါ။
ပရိုဆက်ဆာများ၏ Intel Celeron လိုင်း (G3900, G3930, G1820, G1840) - Intel ရဲ့ထံမှအကောင်းဆုံးဘတ်ဂျက် CPU ကို။ သူတို့ကတစ်ဦး built-in ဂရပ်ဖစ် adapter ရှိသည်။ စွမ်းဆောင်ရည်လျော့နည်းတောင်းဆိုမှုများ applications များနှင့်ဂိမ်းများအတွက်နေ့စဉ်အလုပ်အတွက်အတော်လေးလုံလောက်ပါတယ်။
Intel က i3-7100, Intel က Pentium G4600 - အနည်းငယ်ပိုစျေးကြီးနှင့်အစွမ်းထက် CPU ကို။ အဆိုပါဘက်ပေါင်းစုံဂရပ်ဖစ် adapter နဲ့တူမျိုးစိတ်နှင့်မပါဘဲရှိပါတယ်။ ဒါဟာနေ့စဉ်တာဝန်များကိုနှင့်နိမ့်ဆုံး setting များကိုမှာခေတ်သစ်ဂိမ်းအဘို့သင့်လျော်သည်။ သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂရပ်ဖစ်နဲ့ရိုးရိုးဗီဒီယိုကိုအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်လုံလောက်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
AMD ၏ A4-5300 နှင့် A4-6300 - Processor ကိုဈေးကွက်ထဲမှာဈေးအပေါဆုံးတဦး။ သို့သော်၎င်းတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်အလိုရှိသောခံရဖို့သိပ်အရွက်, ဒါပေမယ့်ပုံမှန်အတိုင်း "လက်နှိပ်စက်" ထိုသို့လုံလောက်ပါတယ်။
AMD ၏ Athlon X4 840 နှင့် X4 860K - CPU ကို core ကို4ဒေတာများပေမယ့် built-in ကြပါဘူးကဒ်။ ဿုံအရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယို၏ရှေ့မှောက်တွင်အတွက်အလယ်တန်းနှင့်အပင်အမြင့်ဆုံး setting ကိုအတွက်ခေတ်သစ်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်နိုငျသညျ, နေ့တိုင်းတာဝန်များကိုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်။
Intel Core i5-7500 နှင့် i5-4460 - မကြာခဏမဟုတ်စျေးအကြီးဆုံးဂိမ်းကွန်ပျူတာများတပ်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းသော 4-Core ပရိုဆက်ဆာ။ သူတို့ကသင်ကောင်းတစ်ဦးဂရပ်ဖစ်ကဒ်ရှိမှသာလြှငျနိုင်, ဒါကြောင့်မဆိုဂိမ်းအသစ်အတွက်အလယ်တန်းသို့မဟုတ်အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကစားရန်, built-in ဂရပ်ဖစ် chipset ကိုမရှိကြပါဘူး။
AMD ၏ FX-8320 - ထိုကဲ့သို့သောဗီဒီယိုတည်းဖြတ်နှင့် 3D-မော်ဒယ်အဖြစ်ခေတ်မီဂိမ်းများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူကိုင်တွယ်ခံရပ်သွားသည်ဟု 8-Core CPU ။ ပိုပြီးထိပ်တန်း-end processor နဲ့တူဝိသေသလက္ခဏာများ, ဒါပေမယ့်မြင့်မားသောအပူနှင့်အတူပြဿနာများရှိပါသည်။
Intel Core i7-7700K နှင့် i7-4790K - တစ်ဂိမ်းကွန်ပျူတာအဘို့နှင့်ပညာရှင်ပီသစွာဗီဒီယိုတည်းဖြတ်နှင့် / သို့မဟုတ် 3D-မော်ဒယ်အတွက်စေ့စပ်သောသူတို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဖြေရှင်းချက်။ မှန်ကန်စွာအလုပ်မလုပ်စေရန်, သငျသညျသက်ဆိုင်ရာအဆင့်အထိတစ်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်လိုအပ်ပါတယ်။
AMD ၏ FX-9590 - က "အနီရောင်" ကနေ ပို. ပင်အစွမ်းထက် Processor ကို။ Intel ရဲ့ထံမှယခင်မော်ဒယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကဂိမ်းစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အနည်းငယ်ယုတ်ညံ့ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးကပါဝါစျေးနှုန်းသိသိသာသာနိမ့်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် Processor ကိုတက်တွင်စတင်။
Intel Core i7-6950X - အိမ်သုံးကွန်ပျူတာများအတွက်အာဏာအရှိဆုံးနှင့်စျေးအကြီးဆုံး Processor ကိုယနေ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဤအဒေတာအဖြစ်မိမိတို့၏လိုအပ်ချက်နှင့်စွမ်းရည်အပေါ်အခြေခံပြီးသင်တစ်ဦးသင့်လျော်သော Processor ကိုရွေးချယ်ဖို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သငျသညျခြစ်ရာကနေကွန်ပျူတာကိုတည်ဆောက်ခြင်းနေပါကကနဦး Processor ကိုဝယ် သာ. ကောင်း၏, ပြီးတော့သူကအောက်မှာအခြားအရေးကြီးအစိတ်အပိုင်းများကိုဖြစ်ကြသည် - ဂရပ်ဖစ်ကဒ်နှင့် Motherboard က။